Sawirro:John Kerry oo Nijaaseeyay Masjid Kuyaal Magaalada Jabuuti iyo Wadaada Xumayaal Khudbo Ka Dhageystay.
Thursday May 07, 2015 - 10:33:17 in Wararka by Super Admin
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa booqashadii uu ku tegay magaalada Jabuuti wuxuu ku dhaqaaqay xadgudub cad oo ka dhan ah muqadasaadka Muslimiinta.
Kerry ayaa gudaha ugalay masjidka Al-iimaan halkaasi waxaa kusoo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda dabadhilifka Jabuuti,taliyaha sirdoonka iyo wasiirka Awqaafta.
Isagoo warbaahinta lahadlayay ayuu John Kerry weerar ku qaaday mujaahidiinta ka halgamaysa bariga qaaradda Afrika isagoo ku tilmaamayay Argagaxiso,Xagjirayaal iyo kuwa diinta islaamka si kale u fahmay!.
Kerry ayaa warbaahinta kasoo muuqday isagoo cod baahiye gacanta ku heysta sida isagoo iska dhigayay wadaad wacdi ujeedinaya dad xertiisa ah.
Arrinta layaabka leh ayaa aheyd John waxaa hareertiisa fadhiyay wadaada xumayaal taabacsan xukuumadda Ismaaciil Cumar Gelle kuwaasi oo u sacaba tumayay markii uu dagaalka ku iclaaminayay muslimiinta.
Culimaa’udiinka soomaaliyeed ayaa tallaabada Kerry ku tilmaamay mid dulli gelinaysa muslimiinta dalka Jabuuti iyagoo Ismaaciil Cumar Gelle ku eedeeyay in wadanka uu gacanta u geliyay wadamada reer galbeedka sida Faraniiska iyo Mareykanka oo saldhigyo waaweyn ka sameystay badda Jabuuti.
Dad badan oo u riyaaqi jiray hadallada kasoo yeera wadada xumayaasha ayay u caddaatay in kuwa nuucaas ah aysan culimo aheyn oo dhanka John Jiraan.
Ma ahan markii ugu horraysay oo mas’uul Mareykan ah uu galo masjid soomaali leedahay sanaddii 2009 ayuu safiirka Mareykanka ee Kenya wuxuu galay Masjidka Abuubakar Sadiiq wuxuuna xilligaasi barbar taagnaa qaar katirsan Hoggaamiyaasha Ururka Al Ictisaam oo Mareykanka iyo xulufadiisa ay u adeegsadaan la dagaalanka mujaahidiinta Al Shabaab.